के जसिता र प्रदिपको बीचमा आउलीन त साम्राज्ञी ? – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsKollywoodके जसिता र प्रदिपको बीचमा आउलीन त साम्राज्ञी ?
फिल्म ‘लिलिबिली’बाट चर्चामा आएकी नायिका हुन् जसिता गुरुङ्ग । उनि बेलायत बस्ने बस्छिन । उनि यति बेला फिल्म ‘लभ स्टेशन’को लागी नेपाल आएको खबर बाहिरिएको छ । जसिता उनको सुन्दरता तथा प्रदिप संगको अफियरलाई लिएर निकै चर्चामा आएकी थिन र यी दुईका अर्थात प्रदिप र जसिताको रिलेसनलाई लिएर एक समय निकै कुराकानी तथा केहि गसिपहरु पनि बनेका थिए । पहिलो फिल्मबाटै जसिता र प्रदिपसँगको जोडीलाई दर्शकले निकैनै रुचाएका थिए ।
सोमवार उनी प्रदीप अभिनीत नयाँ फिल्म ‘रोज’ हेर्न राजधानीको कुमारी हल पुगेकी थिइन् । जसिताले फिल्म हेरेर निस्कँदै गर्दा प्रदीपको कामको तारिफ गरिन् । उनले दर्शकलाई पनि हेर्न आग्रह गरिन् ।
अब फेरी फिल्म ‘लभ स्टेशन’मा यी दुईको जोडीलाई दर्शकले देख्न पाउने सम्भावना निकै रहेको छ । काफिया फिल्म्सको ब्यानरमा निर्माण हुने फिल्मलाई उज्ज्वल घिमिरेले निर्देशन गर्दै छन् । भने फिल्ममा जसिता संगै फिल्मका लागी साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह संग कुरा भईरहेको छ । फिल्मको सिक्किम र दार्जिलिङ्गमा छायाँकन हुने बताईएको छ ।
फिल्म फागुन २४ गतेबाट देशब्यापी प्रर्दशनमा आउने छ ।